Sheekada filimka Manmarziyaan: Jaceyl sedex geesood saameyn badan ugu imaaw filimkan – Filimside.net
Sheekada filimka Manmarziyaan: Jaceyl sedex geesood saameyn badan ugu imaaw filimkan
Ma ahan wax cusub inay Bollywood-ka sameyaan filim jaceyl sedex geesood ah haatana fariintaan waxaa xambaarsan filimka Manmarziyaan oo il gaar ah lagu eegayo qaabka sheekadiisa loo dhigay iyo saameynta uu la imaan karo.
Jilaayaasha filimkan: Abhishek Bachchan, Vicky Kaushal, Tapsee Pannu, Saurabh Sachdeva, Vikram Kochhar
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 37-daqiiqo
Muxuu Ku Wanaagsan Manmarziyaan: Jaceylka sedex geesoodka ah ee sedexda hogaamiye ka dhaxeeyo oo loo dhigay hab qiiro badan laguna jah wareerayo iyo muusiga wacan uu leeyahay filimkan qiirada badan.
Muxuu Ku Liitaa Filimka Manmarziyaan: Director Anurag Kashyap waxaa fiicneyd meelaha qaar fahanka sheekada inuu jilciyo sidoo kalena waxaa fiicneyd muuqaalada isku soo dhawaanshaha fowdadka lagu dhex lifaaqay inuu filimkan ka dhaafo kana dhigo jaceyl qoysaska oo dhan wada daawan karaan.
Fariinta Filimka MANMARZIYAAN Oo Kooban: Filimkan wuxuu ku saabsan yahay gabbar nolosheeda jaceyl ahaan isku heestaan labo wiil sidoo kalena xaalad adag galeyso waana Rumi (Taapsee Pannu) waa gabbar dagaal badan xaqadeena afkeeda ku dhacsan karto kuna nool Amristar.
Rumi (Taapsee Pannu) ayay agoon noqotay waxayna la nooshahay abtigeed waxayna gabadhan jaceyl waali ah u qaadeysaa Vicky aka DJ Sandzzz (Vicky Kaushal) kaasi oo aqalkeeda marwlabo soo booqdo markii dambena waalidkeeda arkayaan lamaanahan oo isku soo dhawaansho wadaagayaan si qaldan halkii ay xiriirkooda waalidka la wadaagi lahaayeen wax walbo qarsoodi ku dhameestaan.
Sidaa darteed Rumi qaladkii ay gashay awgeed waalidkeeda waxay go’aan ku gaarayaan inay wiil u guuriyan soona idleeyaan xiriirkeeda qarsoodida ah ee xaafada laga hadal haayo balse Rumi wey ku gacan seereysaa ayadoo waalidkeeda u sheegeyso kaliya in Vicky ay guursaneyso qof kalena aqbali doonin.
Sidoo kale Rumi waalidkeeda waxay ka balan qaadeysaa in iyada iyo Vicky qalad dambe gali doonin sidoo kalena Vicky waalidkiisa u keeni doono si sharaf ahna u guursan doono.
Balse Vicky wuu ka yara gaabinaa masuuliyada guurka inuu qaato wuuna la dagaalaa jaceylkiisa marka ay ku cadaadiso inuu soo doonto taasi oo labadooda is fahan daro ka dhex dhalineyso.
Dhinaca kale Robbie (Abhishek Bachchan) oo London dagan ayaa imaanayo Amristar si uu qoyskiisa ula kulmo kadibna waxay ka codsanayaan inuu guursado gabbar reer Amristar ah wuuna ka aqbalaa.
Haddaba Robbie (Abhishek Bachchan) qoyskiisa waxay u doorayaan Rumi (Taapsee Pannu) inuu guursado iyadana wey aqbaleysaa madaama jaceylkeedii Vicky uu wax walbo la fahmi weynayo guurna diyaar u ahayn.
Waxaa wada kulamayaan Robbie (Abhishek Bachchan) iyo Rumi (Taapsee Pannu) aragtida kowaad ayuu Robbie ku jeclaanayaa halka Rumi ay dalabka guurkiisa aqbaleyso jaceyl kama ahan balse waxay rabtaa halmar dhibaatada uu ku haayo Vicky ay ka harto.
Vicky waxay ku noqonee naxdin weyn marka uu ogaado in jaceylkiisa Rumi guursan rabto ninka qurbo joogta ah ee Amristar martida ku ah Robbie sidaa darteed maalin ka hor guurka Rumi inta uusan dhicin ayuu Vicky la kulmaa Rumi wuxuuna u sheegaa inuu isbadalay diyaarna u yahay inuu guursado kadibna waxay go’aan ku wada gaarayaan inay isla baxsadaan oo ay masaafo aadaan!
Rumi habeenka marka uu gabalka dhaco waxay u imaaneysaa ninka guursan rabo Robbie waxayna u sheegeysaa runta inaysan jecleyn sidoo kalena aysan guurkiisa aqbali karin!!
Robbie oo naxdin dhexda ka galay halka Rumi iyo Vicky oo ku heshiiyeen inay isla baxsadaan ayaa loo daawan doonaa qaybaha dambe filimkan xiisaha badan.
Maxaa Laga Yiri habka loo dhigay fariinta filimka MANMARZIYAAN: Director Anurag Kashyap si qurux badan ayuu mashruucaan isugu daba riday halka saac ee hore waxyar oo caajis ah ama gaabis ah ayaa ka muuqdo qaybaha dambe laakiin bandhiga sedexda hogaamiye filimkan ayaa habac sanaan walbo ku hilmaan siinayaan.
Run ahaantii MANMARZIYAAN ma ahan DHADKAN  mana ahan HUM DIL DE CHUKE SANAM  balse waa filim jaceyl sedex geesood oo dhalinta xiligaan fahmi karaan sidoo kalena hab jaceyl waali ah lagu soo bandhigay.
Bandhiga Jilaayaasha Filimkan: Waa cajiib sida Taapsee Pannu filimkan u matashay run ahaantii atirishadan aflaan kala duwan ayay si heer sare ah u sameesay sida PINK , NAAM SHABANA  iyo MULK  laakiin MANMARZIYAAN ayaa heer kale xidigtan gaarsiin doono waxaana lagu tilmaami karaa filimkeeda ugu bandhiga wacan ebid mudada ay fanka ku jirto.
Vicky Kaushal 2018 waa sanad u qaas ah filimkii Raazi ayuu door adag ka qaatay halka filimkii Sanju uu bandhig ahaan xitaa Ranbir Kapoor uu hareeyay qof walbana la yaabay doorkiisii caawiyaha ahaa ee hogaamiye u ekaa waa filimkii Sanju.
Balse Vicky Kaushal MANMARZIYAAN ayuuba ka daran yahay doorkiisa DJ-ka ee masuuliyada aan rabin, jaceylka waalida ah ee uu Taapse u qabo iyo marwalbo sida uu u xanaaq badan yahay ayaanba caadi ahayn run ahaantii wiilkan aan la buun buunin wuxuu Bollywood-ka u noqonayaa laf dhabar door walbo sameyn karo.
Abhishek Bachchan door adag ayuu qaatay cid hareen karto ma jirto inkastoo Tapsee iyo Vicky aad loogu amaanay filimkan haddana Abhishek kama liito door dagan ayuu qaatay, qaabka uu murugada u sameenayo sida uu dareenka indhaha kaga muujin karo ayaan inaba caadi ahayn dhabtii Junior Bachchan inuu mudo labo sano ka badan fanka ka maqnaado waxay ahayd qalad haddiiba uu sidaan shaashada saameyn ugu yeelan karo!
Gunaanad: MANMARZIYAAN waa filim jaceyl sedex geesood ah oo sheekadiisa aad u wacan tahay sidoo kalena hogaamiyaasha filimkan siweyn kaga baxsadeen qaab jiliin ahaan muusig wacan leh xayeysiin balaarana loo sameeyay arimahaas oo is kaashaday awgeed waxay ka caawin doontaa maal maha sabtiga iyo axada inuu qoysaska siweyn usoo jiito mashruucan.
Fadlan hoos kaga bogo goos gooska filimka MANMARZIYAAN:
Waxaa Aqrisay 982